Ngaphakathi kwiXesha le4 le "Veronica Mars" (iNqaku le-1 le-2) -I-NAB bonisa Iindaba ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » Okufumaneka » Ngaphakathi kwiXesha le4 le "Veronica Mars" (iNqaku 1 le2)
Ngaphakathi kwiXesha le4 le "Veronica Mars" (iNqaku 1 le2)
IVeronica Mars Umlawuli Scott Winant kwiseti (© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. Onke Amalungelo Agciniwe.)
Akuzange kubekho ixesha elinomdla ngakumbi lokuba ngumnxibelelanisi weTV omkhulu kunangoku. Kwaye nexesha elitsha IVeronica Mars, ebibhengezwe kwinyanga ephelileyo kwi-Hulu, yi-Exhibit A yesizathu soko. Olu luchungechunge luhambe indlela ende ukusukela oko yaqala njengokwahluka kwe-noir kwi-Nancy Drew, kunye nomcuphi wayo ekucombululeni iimfihlakalo kwisikolo esiphakamileyo kunye nekholeji. Ungcelele lwexesha lesine lesine yefilimu yeklasikhi yeyona filimu imnyama kwaye inamandla kakhulu, ngohlobo lobuqili, unxibelelwano olufundwayo olunxulunyaniswa nomqambi womboniso, umvelisi-umbhali uRob Thomas. Ukuba awulibonanga ixesha le4 okwangoku, ndincoma ukuba uyibukele i-ASAP. Kwaye kunqande ukufunda nantoni na malunga nexesha elingachazi ukuba ayonakalisi. (Kwirekhodi, eli nqaku alinababhubhisi abaphambili.)
Ukutsho ukuba ixesha 4 lutshintsho lomdlalo, nangona kunjalo, kubo bobabini abalinganiswa kunye nochungechunge ngokwalo akabalwa njenge "mtshabalalisi" kuba uVeronica (Kristen Bell), kwingxelo yakhe yelizwi ekuqaleni kwesiqendu sokuvula, balumkisa ababukeli ukuba ayisiyiyo yonke into eyophela kakuhle ngexesha imfihlakalo yangoku isonjululwe. Le mfihlakalo ijikeleze uthotho lweebhombu kwidolophu yaselunxwemeni yeNeptune, CA (indawo yokubonisa intsomi) ngexesha lekhefu lonyaka kunye noqikelelo lwentwasahlobo. Ukuqhushumisa kokuqala, kwindawo enomgangatho ophantsi wohlahlo-lwabiwo mali, kuseka uthotho lwezityholo, ukuphinda-phinda kabini, ukuziphindezela, kunye nezityholo zokuziva unetyala, ezinye zinobulungisa, uninzi alunjalo. (Ngexesha elide IVeronica Mars abalandeli, aziwa njenge- "marshmallows," sele beyazi, iNeptune “yidolophu engenanqanaba eliphakathi,” kwaye udidi lwempikiswano phakathi kwezinto abanazo nabangenazo, ebehlala bephemzela nje apha phantsi komhlaba. Ngobungozi ekuvukeni kweebhombu.)
Eli xesha likwasebenza nokuhlaziya abalandeli ngoku kubomi bolu chungechunge lwabalinganiswa abathandekayo. UVeronica, ekwiminyaka yakhe ephakathi ye-30s, uye waba liqabane notata wakhe uKeith (Enrico Colantoni) kwi-arhente yakhe yabucala yabacuphi, into elungileyo kuKeith, ngoku ohamba nomgodi, kuba uyaqhubeka neengxaki zempilo ngenxa ingozi yemoto eye yabakho kwi-2014 IVeronica Mars imuvi. UVeronica kunye nesithandwa sakhe sexesha elide, kunye nogxa wakhe uLogan Echolls (Jason Dohring) babelana ngendlu yokuhlala elunxwemeni xa bengekho phesheya kwisikhundla sakhe njengeGosa loBukrelekrele. Ezinye iintandokazi, njengoLogan umhlobo wakhe osenyongweni, inkwenkwana yesityebi eyayisisityebi kunye nesilwanyana sepati uDick Casablancas (Ryan Hansen); Umhlobo osondeleyo kaVeronica uWallace Fennell (uPercy Daggs III), inkokeli yeqela le-biker uEli "Weevil" Navarro (uFrancis Capra); kunye negqwetha elisikiweyo, umkhuseli woluntu, kunye nongumthengi wamaxesha athile kuPhando lwe-Mars, uCliff McCormick (Daran Norris), bonke babonakala.
Ukujoyina ezinye zeenkwenkwezi zokuqala ezinenqanaba lokuqala, kubandakanya uPatton Oswald njengomfana ohambisayo wokuhambisa ipitsa kunye neyelenqe uPor Epner; UJK Simmons njengo-ex Clyde Pickett, osebenza njengomphathi wezinto zikaDick ezityhutyhayo zikarhulumente, "Big Dick" Casablancas (David Starzyk); kunye noKirby Howell-Baptiste njengoNicole Malloy, ongumnini we "Comrade Quacks," umngxunya owuthandayo wokuthambisa abaphula intwasahlobo.
Umvavanyi-Ummeli ophumeleleyo wama-Emmy amabini-uScott Winant, mhlawumbi wabetha eyaziwa ngokuba luchungechunge olugwetyiweyo amashumi amathathu eesenti, Ubomi Bam, Iphula kakubi, Igazi lokwenyani, yaye Ukubalwa, yinto entsha ukuba I-Veronica Mars, kodwa waphathiswa iziqendu ezibini ze4, “Ukuphulukana neStreak” kunye nexesha lesiphelo elithi “Iminyaka, Amazwekazi, Ukuphalazwa kwegazi.” Kodwa ke, wafumana amanye amabali afana nelinye labucala.
“Ayifani Iphula kakubi, bekukho ulungelelwaniso olubuthathaka phakathi koncuthu, idrama, kunye nezenzo zobundlobongela ngesiquphe, ”utshilo uWinant. "U-Kristen Bell unokwazi ngokungaqhelekanga ukufumana ithoni elungileyo ekusebenzeni kwakhe ukuze yonke le mibala ihluke kunye. Ndamthatha umkhondo wam xa ndalathisa abanye abadlali ukuba baqiniseke ukuba iziqendu zaziva zichanekile. Kananjalo umboniso unesingqisho semvelo kokubini kwincoko yababini be-smart-smart kunye nembali ebalisa ibali. Ndisebenze nzima ukwenza isitayile sokubonakalayo esixhasa ezo zinto. Ndikonwabele ukufunda ngembali yomdlali ngamnye kumdlalo weqonga kunye nendlela abalinganiswa babo abanempembelelo ngayo kwiVeronica. Njengomntu omtsha, injongo yam yayikukuhlonipha okwedlule, kodwa nokuza nombono wento endinethemba lokuba iya kunika ababukeli bokuqala indlela ekhululekile kolu ngcelele.
Njengoko wayecacile kum, uWinland ngewayengonwabanga ukusebenzisana no IVeronica Mars cast kunye neqela labasebenzi. "Okokuqala, nguKristen ngummangaliso," watsho. Akukho namnye wabadlali abanesiphiwo endakhe ndasebenza naye kodwa olona qonga lokwenene lomntu. Kwiseti, ejolise ngokupheleleyo kwaye etshixiwe, kungekuphela lomsebenzi wakhe, kodwa kwikhulu lezinto ezijikelezayo kuye. Ndikhe ndatsho kaninzi ngelixa ndidubula ukuba ukuba noKristen Bell kwimeko kukufana nomphathi we-in-set. Unomdla kwaye uyawazi umsebenzi owenziwa ngumntu wonke. Nokuba idubuli kangakanani, unakho ukuziqhelanisa kwangoko kwaye enze amaxesha anzima kakhulu ukuba lula. Kwaye uRicco [Colantoni] uyinkosana. Naye, ungumdlali obalaseleyo, kodwa njengoKristen, ungumntu obalaseleyo, unobubele kwaye unesisa. Emazantsi emgceni, ngaphaya kwebhodi, yonke indawo yokubambisa yayiyinto emnandi ukusebenza nayo. Oonqevu bebaziva ngathi basekhaya kwaye bandenze ndaziva ndamkelekile. Wonke amasebe abonise umdla kunye nehlombe ngazo zonke izimvo zam kwaye andinike izixhobo endizifunayo ukwenza into ekhethekileyo kulo mboniso ubalaseleyo. ”
Yintsingiselo yobuchule beWinant njengomlawuli ukuba iziqendu zakhe zibini azinakuba zahlukileyo kwitoni. "Ukulahleka kwe-Streak," isiqendu sesihlanu sexesha lesibhozo sexesha, lilingana neli xesha lonyaka 'wokungena kwesixhenxe,' uhlobo lwezinto ezinesoyikiso kunye netyholwa, kunye nelizwi elikhaphukhaphu kunezinye iziqendu. , nangona inesabelo sayo sengxabano enkulu. Ngapha koko, inezinto ezihlekisayo ezimbini ezihlekisayo-ngasemva. Eyokuqala yipati endlwini kaWallace enomfazi wakhe kunye nomntwana, kwaye njengoko u-Veronica esitsho, "abahlobo babo yuppie." (Xa waxelelwa ukuba uVeronica ngumcuphi wabucala, undwendwe luhambelana nomsebenzi wakhe kwiimuvi ezindala zikaCharlie Chan. ) Okulandelelana kulandelwa kukudibana kunye neVeronica kunye noNicole wokuphosa umbi kwakhona kwindawo yokuhlambela yaseFennell. Ndibuze u-Winant ukuba uziva ukhululekile ngokuphele kunye namaxesha akhaphukhaphu anjalo kunye namaxesha aqatha ngakumbi alandelayo. “Ndi do Zive ukhululekile xa uneziphelo zozibini kwaye ubasondele bonke ngokulinganayo, ”wandixelela. "Okokugqibela njongo yam kukufumana inyaniso ngokunyaniseka kulo mzuzu ngamnye nokuba ithini na."
Sithetha kakhulu, inqaku lesibini likaWinant, iphepha-mfanekiso elichazwe ngasentla "Iminyaka, Amazwekazi, iGazi," lelona xesha lakha lanzima kakhulu lonyaka. Umzekelo, ukuvulwa kwesiqephu sesi sehlo ngumbhodamo ozibangela ukuba wothuswe kugonyamelo lwazo kodwa ubetha kabuhlungu njengohlobo lokusesikweni. Ndixelele uWinant ukuba isiganeko sandikhumbuza ngesehlo esenzeka ngesiqendu esivela kwixesha lokuqala lonyaka Fargo walathisa ngokubizwa "Ngubani oGqiba Ibarber?", nayo eyayibulala eyothusayo kwaye ihlekisayo, kwaye ethelekisa zombini ezo ziqwenga kudidi lwababukeli bamahlaya amnyama abanxulumana neCoen Brothers kunye noQuentin Tarantino. "Kuqala, ndicekeceke ukunxulumana noMnumzana uCoen noTarantino," uphendule watsho, "ewe, ndiziva ndonwabile kulolo hlobo lokulandelelana. Ndiyakuthanda ukujongana nezinto ezintsonkothileyo nezintsonkothileyo. Undivumela ukuba ndisebenzise ubugcisa be-cinematic ukuhambisa imvakalelo kunye neemvakalelo. I IVeronica Mars ukulandelelana, ngaphandle komxholo wayo owoyikekayo, ndifundele njengeFrench French. Oonobumba abaninzi abanezizathu ezahlukeneyo zokungqubana ngexesha elinye kwindawo enye. Umceli mngeni wethoni ngenxa yokuba ufuna ubundlobongela bubonakaliswe ngokunyaniseka, kodwa kwangaxeshanye, kufuneka bangene kumboniso uwonke. Olu khetho luzenzele lubalulekile kwaye kufuneka luphathwe ngokuchanekileyo, kungenjalo umbukeli uya kugxothwa kumava. ”
Nangona kumnyama njengokulandelelana kokuvula, isenzo sesithathu sesiqendu eso sinzima kakhulu. Ndibuze uWinry ukuba kunzima kanjani ukusondela kwabo. “Ndiyakuqonda ukubaluleka kolu lungelelwano nokuba kunokuba nzima kangakanani abalandeli abathile,” uphendule watsho. “Ndenze konke okusemandleni am ukuyinika ubunzima obufanelekileyo ngaphandle kokujongela phantsi into endiyaziyo ukuba ingangumzuzu ophazamisayo. Ndaphinda ndathembela kwintsebenzo kaKristen kunye nokubhala okuqinileyo ukusiphatha ngokubhala eli bali. ”
Konke kuzo zonke, uWinant ufumaneke esebenza kuzo IVeronica Mars ube ngamava anelisayo ngakumbi. Ukuba IVeronica Mars ndibuyela ixesha lesihlanu, ”utshilo,“ bendiza kuxhaphaza ishedyuli yam kwaye ndenze yonke imigudu enokubakho ukuba yinxalenye yayo. Iimpawu ezinje ezinqabileyo kwaye ndikuthatha njengenxalenye yelilungelo nembeko. "
YE I-A-A, Iinkqubo ezahlukeneyo, UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli HULU Rob thomas Iintetho kunye nemisrya BuTeknoloji Iinkqubo ezahlukeneyo IVeronica Mars Abazalwana beWarner	2019-08-16
Previous: Igumbi lokuYilwa kweFashoni ngaphakathi
next: Uyilo lwegraphic / Imveliso yedijithali